Magaalada muqdisho ayaa laga qabanaya munaasabada sanad guurada 76aad ee ka soo wareegtay aas aaskii ciidanka Booliska Soomaaliyeed. | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Magaalada muqdisho ayaa laga qabanaya munaasabada sanad guurada 76aad...
Magaalada muqdisho ayaa laga qabanaya munaasabada sanad guurada 76aad ee ka soo wareegtay aas aaskii ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacaya Munaasabad aad u ballaaran oo lagu xusayo sanadguurada 76-aad ee ka soo wareegtay aas aaskii ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Munaasabada ayaa waxaa ka qeyb galaya Masuuliyiin badan oo ka tirsan Dowlada oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha dalka Maxamed C/laahi Maxamed (Farmajo), Wasiiro, Xildhibaano, Taliyayaal Ciidan iyo Saraakiil ka kala tirsanaa Hay’adaha ammaanka dalka.
Munaasabada ayaa waxaa Khudbado kala duwan ka jeedin doona Madaxweyne Farmaajo iyo Masuuliyiin kale, waxaana dhammaantood la filayaa in ay ka hadlaan dhibaatada uu soo maray Booliska iyo guulaha hadda uu gaaray Booliska Soomaaliyeed.
Inta ay munaasabadu socoto ayaa waxaa halkaasi ay Ciidamadu ku soo bandhigi doonaan Gaada ka cayaar iyo dhoolatus, waxaana halkaasi imaan doonoa Ciidamo Boolis ah oo ka qeyb qaadanaya Munaasabadda xuska Maalinta Booliska 20-ka December.
Sidoo kale waxaa la filayaa magaalooyinka maamul goboleedyada dalka in lagu qabto xuska maalinta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, maadaama sanad walba xilligan oo kale la xuso.
DHAGEYSO:-Warka Subaxnimo Radio Baidoa 05-8-2021